YST | index
YOUR SMART JOURNEY GUIDE
Home Events & News Blog Career Partner Community
Yangon arrives at its 100th country and appoints Uli Gal-Oz as VP Business Development
ယနေ့ဟာ ရန်ကုန်မြို့ကြီး၏ မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကဏ္ဍတွေအတွက် အလွန်အသုံးဝင်စေမည့် ရဲ့ Mobile Application Facebook Page ကို စတင်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီရှင်။ #YST ဆိုတာ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဘတ်စ်ကားတွေရဲ့ တည်နေရာကို သိရှိနိုင်ပြီး မိမိ သွားလိုသည့် နေရာကို လွယ်ကူစွာရွေးချယ်နိုင်ရန် ၊ ဘတ်စ်ကားစီးနှင်းသည့် ခရီးသည်များ အတွက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး သတင်းအချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်အမျှ ပေးပို့သည့် Mobile Application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၂၀ခုနှစ်၊ မေလ (၁) ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် အလုပ်သမားနေ့ (မေဒေးနေ့) အား YST မိသားစုမှ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးတွင်ရှိသော ကာယ ၊ ဉာဏ လုပ်သားအားလုံး COVID-19 ကပ်ရောဂါမှ အမြန်ဆုံးကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။
ဝါဆိုလပြည့် "ဓမ္မစကြာအခါတော်နေ့" တွင် မိဘပြည်သူများ နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်း၍ ကုသိုလ်ထူးများ ရရှိပါစေကြောင်း #YST မိသားစုမှ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါသည်။
(၇၃) နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနားအား ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပါ၏။ 🇲🇲🇲🇲🇲🇲 ၁၉ ဇူလိုင် မမေ့နိုင် အာဇာနည်နေ့ တို့မမေ့
ဖေဖော်ဝါရီ (၂၂) ရက် စနေနေ့ သုဝဏ္ဍဘူမိ Event Park “ Myanmar Top 100 by JOOX “ ပွဲကြီးမှာ #YST လည်း ရှိနေပါမယ်။ လက်ဆောင်တွေလည်းပေးသွားမှာမို့ ဆက်ဆက်လာခဲ့ဘို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်။
တပေါင်းလပြည့်နေ့= မြတ်ဗုဒ္ဓပြည်တော်ဝင် အခါတော်နေ့။ မြတ်ဗုဒ္ဓပြည်တော်ဝင် အခါတော်နေ့အဖြစ် ကျင်းပရခြင်းမှာ - တပေါင်းလပြည့်နေ့တွင် ကာဠုဒါယီမထေရ်က မြတ်စွာဘုရားအား ကပိလဝတ်နေပြည်တော်သို့ ကြွရောက်တော်မူပါရန် လျှောက်ထားသည်ကို အကြောင်းပြု၍ ကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
App Developer (Male or Female) Job Descriptions - 3+ years of experience with React Native - An understanding of React Native best practices andacommitment to following them. - Need to have experiences in Google APIs (Map, Routes and Places). - Ability to work with real-time APIs Data. - Ability to create and maintain continuous integration and delivery of React Native applications. - Thorough understanding of React.js and its core principles - Familiarity with code versioning tools, such as Git - iOS & Android experience isaplus - Forensic attention to detail. - English Skills (ability to effectively communicate via written and spoken English). 🔶 Accountant Admin Executive (Female) Job Descriptions - Smart, dynamic, hardworking - Knows how to readabalance sheet - Accountancy professional qualification preferred. - Knows government taxation policy. - Petty cash handling - Vendor management - Willingness to learn - Love for travel.
တောင်သူလယ်သမား နေ့အား လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုဂုဏ်ပြုပါ၏။
(၇၃) ကြိမ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အား ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပါ၏။
🎎🎊HAPPY CHINESE NEW YEAR 2020🎊🎎
၂၀၂၀ခုနှစ် ၊ မတ်လ (၂၇) ရက်နေ့ ယနေ့ကျရောက်တဲ့ (၇၅) နှစ်မြောက် မြန်မာ့တပ်မတော်နေ့အား လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါ၏။